स्वास्थ्यलाई निकै उपयोगी दही : जान्नुस् आखिर दही बनाउन कसले सुरू गर्यो ?
Thursday, 25 Jan, 2018 4:39 PM
दही तपाई हामी सबैले निरन्तर खाएकै कुरा हो । दहीका धेरै फाइदा छन् भन्ने कुरामा पनि कसैलाई शंका छैन । संसारका धेरै मानिसहरु दही सेवन गर्छन् । तर यहि दही संसारमा सबैभन्दा पहिले कसले बनाएको होला भन्ने कुरा हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
सबैभन्दा ठुलो प्रश्न : दही कसले बनायो ?
एशियाली देशको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै पहिलेदेखि नै दही जमाउँदै र खाँदै आएका छौँ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । कष्ण भगवान समेत नौनी चोर वा दही चोरको नामले प्रख्यात थिए । तर पश्चिमी देशहरुमा दहीको सुरुवात कहाँबाट अनी कसरी भयो यसमा विवाद छ ।
दही जमाउने सुरुवात
युरोपमा एउटा यस्तो देश छ जसको बारेमा भनिन्छ दहि पुर्वि युरोपिय देश बुल्गारियाको देन हो । दहीको इतिहास त्यति नै पुरानो छ जती पुरानो स्वयं बुल्गारिया देशको इतिहास छ । यहाँ दहीलाई कैयौँ रुपमा खाइन्छ । यहाँको खाना दही बिना अधुरो छ ।
धेरै बुल्गारियाका मानिसहरुले चार हजार बर्ष पहिले घुमक्कड जातका मानिसले दही जमाउने तरिकाको खोज गरेको दाबी गर्छन् । यी जातका मानिसहरु आफ्नो बच्चाहरुको साथमा एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा घुमिरहन्थे ।
यस्तो अवस्थामा दुधलाई बचाएर राख्ने कुनै उपाय उनीहरुसँग थिएन । त्यसैले उनीहरुले दुधलाई जमाएर प्रयोग गर्न सुरु गरे । यसको लागी उनीहरु जनावरको छालाको प्रयोग गर्थे । दुधलाई एक निश्चित तापक्रममा राखिन्थ्यो । ताकि त्यसलाई जमाउने जीवाणु पैदा होस् । लगभग यसै प्रक्रियालाई अपनाएर संसारका अन्य देशमा पनि दही जमाउने सिलसिला सुरु भयो ।
दहीको ब्याक्टेरियाको खोज
दही बनाउने काम मध्य एशिया र मध्य पुर्वमा भिन्ना भिन्नै समयमा सुरू भएको थियो । यूरोपको बाल्कान प्रायद्धिप स्थित बुल्गारियामा दहीको प्रयोगको सिलसिला शताब्दी देखि चल्दै आएको छ । त्यहाँ दही जमाउनको लागि चाहिने ब्याक्टेरीयाको प्रजाति नै पाइन्छ । साथै त्यहाँको वतावरण पनि दही जमाउनको लागि निकै प्रतिकुल पनि छ ।
जसले जे सुकै भनेता पनि पश्चिमा देशहरुमा दहीको सुरुवात गरेर दहीलाई व्यापारीकरण गर्ने राष्ट्र भने बुल्गारिया नै हो । बुल्गारियाका एक वैज्ञानिक स्टामेन ग्रीगोरोवले नै सर्वप्रथम दही जमाउने तरिकाको बारेमा रिसर्च गरेका थिए । साथै बुल्गारियामा यिनै वैज्ञानिकको नाममा ट्रन क्षेत्रमा एउटा म्यूजियम नै बनाइएको छ । स्विजरल्याण्डको जेनेवा विश्वविद्यालयमा पढेका ग्रीगोरोवले आफ्नो गाउँबाट दहीको ठेकी लगेर रिर्सच सुरु गरेपछि मात्र दही जमाउनको लागि ब्याक्टेरीयाको आवश्यकता हुने कुरा फेला परेको थियो । जुन ब्याक्टेरीयालाई ल्इाक्टोबेसिलस बुल्गारिस नाम दिइएको थियो ।
लोमो आयुको रहस्य
ग्रिगोरोवको रिसर्चलाई आधार मानेर रुसका नोबेल पुरस्कार विजेता बायोलोजिस्ट एली मेचनिकफले बुल्गारियाको किसानहरुको लामो आयुको रहस्य दही धेरै खानु रहेको तथ्य फेला पारेका थिए । बुल्गारियाको रोडोप पर्वतमा बसोवास गर्दै आएका प्राय सबै मानिसहरुको उमेर सय बर्ष भन्दा धेरै थियो । विश्वभरीमा नै सय बर्ष नागेका मानिसहरुको अत्याधिक संख्या त्यहाँ नै रहेको छ ।
दही खानाले आयु लम्बिने सुचना पाए पछि बुल्गारियाको दहीको माग फ्रान्स, जर्मर्नी, स्विट्जरल्याण्ड, स्पेन र ब्रिटेनमा अचानक निकै बढेको थियो
। जसको फल स्वरुप यी देशहरुमा दहीलाई खानामा अनिवार्य जस्तो नै गरिन थाल्यो ।
खास गरेर बुल्गारियामा दही घर–घरमा नै तयार गर्ने गरिन्छ । बुल्गारियामा ‘रुकाटक’ भनिने माटोको भाँडामा दही जमाउने गरिन्छ । त्यहाँका महिलाहरुले आफ्नै परम्परागत शैलीमा दही जमाउने गरेता पनि धेरै माग हुने गरेकाले त्यसको शैलीमा परिवर्तन आएको छ । साथै बनाउने तरिकामा आएको परिर्वतनका कारणले गर्दा बुल्गारियाको दहीको स्वादमा पनि परिवर्तन आएको छ ।
बुल्गारियाको दहीको बढ्दो मागका कारणले गर्दा आज हरेक प्रकारका बट्टाहरुमा दही प्याक गर्ने गरिन्छ । त्यहाँका मानिसहरुले मौसम अनुसार दुध जमाएर दही बनाउने गर्दछन् । कहिले भेडाको दुधबाट दही बनाइन्थ्यो त कहिले गाईको त कहिले भैंसीको दुधलाई जमाएर दही बनाइन्थ्यो । तर आज दहीको एक मात्र विकल्प भनेको भैंसीको दुध मात्र हो ।
परम्परागत दही बनाउने काम
१९४९ सम्म बुल्गारियाको प्राय सबै घरहरुमा दही बनाउने काम गरिन्थ्यो । तर जब त्यहाँको दहीको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गयो तब त्यहाँको सरकारले डेरी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नै गरेको थियो । बुल्गारियाको सरकारले विश्वले आफुलाई सोवियत संघको सहयोगी राष्ट्रको रुपमा नभएर त्यहाँको परम्परागत तरिका बाट बनाइने दहीको नामले चिनियोस भन्ने चहान्थ्यो । त्यसैले गर्दा त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रका घर–घरमा गएर दहीको नमूना पनि लिइन्थ्यो र त्यसलाई अझ राम्रो र स्वादीलो बनाउनको लागि नयाँ तरिकाहरु पनि अप्नाउने गरिन्थ्यो । जसका कारणले गर्दा बजारमा अर्को नयाँ स्वादको बुल्गारियन दही पनि पाउन थाल्यो । पछि सरकारले उक्त ब्राण्डका दही निर्यात गर्ने सुरु पनि गरेको थियो ।
दही बनाउने कला
आज पनि बुल्गारियाको सरकारी कम्पनी एलबी बुल्गारिकम आफ्नो सहयोगी देशहरु जापान र दक्षिण कोरियालाई बुल्गारियन दही करोबार गर्ने इजाजत दिन्छ । बुल्गारियाको दहीमा पाइने जीवाणु स्वास्थको लागि निकै नै फाइदाजनक हुने र सो जीवाणु त्यहाँ बाहेक अरु कुनै पनि एसियाली देशहरुमा नपाइने भएकाले हरेक बर्ष ति जीवाणुलाई बुल्गारियाबाट कोरिया र जापान पठाइनु सबैभन्दा रोमाञ्चक कुरा हो ।
१९८९ मा जब बुल्गारियामा कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य भयो तब त्यसको सिधा असर बुल्गारियन दहीमा परेको थियो । त्यहाँ दहीको कारोबार कम भएको थियो । परम्परागत दही बनाउने डेरीहरुको संख्यामा पनि कमी आएको थियो । यो संख्या ३ हजारबाट घटेर २८ क्षेत्रमा मात्र सिमित भएको थियो । तर अहिले स्थानिय उत्पादकहरुले आफ्नो परम्परागत करोबारलाई पुनः स्थापना गर्ने कोशिश गरेका छन् ।
बुल्गारियामा दहीका धेरै प्रकारका दही नपाइएता पनि जायकामा भने विभिन्न प्रकारका दही पाउन सकिन्छ । यति सम्म कि एकै परिवारका दुई महिलाले तयार गरेको दहीको स्वाद पनि फरक–फरक हुन्छ । दही बनाउनु त्यहाँका मानिसहरुको लागि एक कला हो र सो कला एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ ।